Deni oo Gaas maanta kala wareegay Xilkii Madaxweynaha Puntland – Kalfadhi
January 14, 2019 Kalfadhi
Madaxweynaha Puntland ee cusub, Saciid Cabdullaahi (Deni), ayaa maanta kala wareegay xilkii Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas). Munaasabad ka dhacday maanta Garoowe ayuu Gaas xilkii kula wareejiyey Deni. Gaas waxa uu Madaxweyne Deni u sheegay iney jiraan mashaariic ay tahay inuu sii dhameystiro, halka kuwa kale uu isagu qabtay intii uu xafiiska joogay.
“Waxaa farxad weyn ii ah maanta inaan xilka si rasmiya ugu wareejiyo Madaxweynaha la doortay ee Puntland, Mudane Saciid Cabdullaahi Deni” ayuu yiri Gaas. “Waxaana ku wareejinayaa (mashaariicda) dhismayaasha madaxtooyada ee magaalada Garoowe, Gaalkacyo, Boosaaso iyo Khardho” ayuu yiri Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Gaas.
Intaas waxa uu raaciyey inuu Madaxweynaha xilka kala wareegay maanta ku wareejiyey mashaariic fara badan, oo ay ka mid tahay in inuu dhameystiro dekedo ay ka mid tahay midda Boosaaso, oo uu sheegay inuu ku socdo dhismo casri ah, dhismaha Garoonka Diyaaradaha Gaalkacyo, wadooyin isku xira magaalooyin ka tirsan Puntland iyo dhismaha ciidan ka tirsan kuwa Puntland, oo uu sheegay iney xukumaddiisu ku hawlaneyd.
Waxa uu Gaas Reer Puntland ka codsaday iney cafiyaan. “Waxaan cafis weydiisanayaa shacabka Reer Puntland” ayuu yiri Cabdiwali Maxamed Cali (Gaas). Waxa uu sheegay iney niyad ka tahay cafiskaas uu si guud uga dalbaday Reer Puntland, si gaar ahna u weydiistay kuwa wax ka tabanaya. Waxa uu soojeediyey in Madaxweynaha cusub lala shaqeeyo, isaga oo u duceeyey.
Madaxweyne Deni ayaa si cad u sheegay in wax ay shacabku og yihiin iyo wax sir u ah Dowlad Goboleedka Puntland-ba ay kala wareegeen Madaxweynihii hore ee Puntland, Cabdiwali Gaas. Intaas kadib ayuu sheegay inuu rajeynayo inuu dhameystiro dhamaan mashaariicda qabyada u ahayd maamulkii Gaas. “Wixii aan u aragno iney ku qurux badnaato inaan wax ka bedelno waan ku soo siyaadin doonaa maamulka Puntland” ayuu yiri Deni.
Madaxweyne Deni waxa uu sheegay in Gaas uu ahaa nin dulqaad badan, isaguse uusan sidaas ahayn. Maaliyadda ugu horreysa ee ay Xukumaddiisu fasixi doonto ayuu sheegay in loo soo deyn doono ciidanka iyo shaqaalaha. “Mushaaraadka ciidanka iyo shaqaalaha waa ahmiyadda koowaad, waana kharashka ugu horeeya ee ka bixi doona khasnadda dowladda” ayuu yiri Madaxweyne Deni.
Waxa uu qodbaddii xilka uu maanta kula wareegayey ku dhex muujiyey sida uu maamulkiisu ahmiyad gaar ah u siin doono arrimaha dhaqaalaha. Waxa uu sheegay inuu wax badan ka sixi doono, kadibna uu ka qaadi doono xayiraadaha uu saaray, durbadiiba loo doortay isaga.
Madaxda Dowladda Soomaaliya oo ka qeyb galay Xafladda Xiritaanka Kalfadhiga 4-aad ee Golaha Shacabka